Maxaa ka jira in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u soo galeen Dhuusamareeb? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u soo...
Maxaa ka jira in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u soo galeen Dhuusamareeb?
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Dagaalyahano la rumeysan inay ka tirsan yihiin Ururka Al-Shabaab ayaa la soo sheegaya in ay gudaha u soo galeen Magaalada Dhuusamareeb, xilli magaalaadaasi uu ka jiro mashquul xoogan oo arrimaha doorashada la xiriira.
Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee ka hawlgala Magaalada Dhuusamareeb ayaa lala wadaagay xoggo uu helay Sirdoonka, oo ku aadan in mintidiin ka tirsan Al-Shabaab ay u soo duseen magaaladaasi, xilli ay ka yimaadeen dhinaca Magaalada Ceelbuur.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijinaya in Saraakiisha amniga la faray inay si dhow uga war qaataan, oo markastana ay ku dhaqaaqaan farriimaha ay u soo gudbiyaan ciidanka dharcadka ee billihii ugu dambeysay, ay dowladdu ka hirgelisay magaalada.
xubno ka tirsan Al-Shabaab oo gudaha u galay Dhuusamareeb